Inona avy ireo karazana tambazotra Yi guardrail mahazatra?
1. Ny harato mpiambina zana-kazo Ny harato mpiambina sary dia antsoina koa hoe "ny karazana fantsom-panafody anti-fiakarana fiakarana", "ny fantsom-pejy fitokana-monina" sns. Izy io dia fivondronan'ny vokatra tena malefaka, harato mpiambina ampiasaina, malaza noho ny harato mpiambina ankapobeny, ...
Fampiharana momba ny harato fiarovana tariby
Tariby misy barbed, fantatra ihany koa amin'ny harato fefy tariby, harato fanokanana tariby, harato fefy tariby. Izy io dia fiarovana, tsara tarehy, fiarovana ny tontolo iainana, azo ampiharina amin'ny karazana harato fefy vaovao. Wire harato fitaovana dia welded amin'ny kalitao vy karbaona avo lenta, fanasokajiana amin'ny fitsaboana an-tany: black wire protiv ...
Tady tariby amin'ny firoboroboan'ny indostrian'ny fananganana
Ankehitriny ny indostrian'ny fananganana dia nivoatra haingana. Ny sasany amin'ireo mpandrindra trano lehibe dia mampiasa teknika fananganana vaovao amin'ny tranobe avo, atrikasa ary any an-kafa. Ny fampiasana harato fanamboarana, tariby misy barika ary harato hafa hanoloana ny famehezana ny rebar amin'ny tanana dia be mpampiasa amin'ny construc ...